Mayelana NATHI - Jiangxi Checheng Trading Co., Ltd.
I-Jiangxi Checheng Trading Co., Ltd. yasungulwa ngo-2016, singumkhiqizi opholile wezipholishi zemoto nemikhiqizo yokunakekelwa kwezimoto, ehlanganisa ukuthuthukiswa nokukhiqiza, ukuthengisa nokuhweba ndawonye.
Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-4 + yentuthuko eqhubekayo kanye nezinto ezintsha, imikhiqizo yethu ithunyelwe eYurophu, eMelika, eningizimu-mpumalanga ye-Asia, e-Afrika, eMpumalanga Ephakathi, njll. Ihlolwe kakhulu ngamakhasimende nabancintisana nabo kulayini webhizinisi ofanayo.
I-JIANGXI CHECHENG igxile ku-R & D, ukukhiqizwa, nokumaketha kwemishini emibili yokupholisha isenzo, i-rotary car polisher, ne-mini machine polisher. Sithuthukise ngokuzimela futhi sakhiqiza imishini ehlukahlukene yokupholisha, efana ne-NEW Super Palm Series DA polishers, Best Sell X-Bot series DA polishhers, DF series DA polishhers, rotary polishers, and mini polishhers. Imikhiqizo yethu itholwe izitifiketi ze-CE ne-RoHS.
Njengomkhiqizi, sinefektri yethu eseYongkang, eZhejiang lapho idume khona ngomkhakha wokwakha umshini, yonke i-R & D nokukhiqizwa kwenzeka lapha. Umqondisi Wezobuchwepheshe, futhi ongumninimasheya waseChecheng, unolwazi lweminyaka eyi-10 + ku-R & D nasekukhiqizeni abapholishi bezimoto. Ngobuchwepheshe bakhe obuningi nokuqonda kwemikhiqizo nezimakethe, imishini yethu yamukelwe kahle ngamakhasimende futhi yabonwa imakethe kungekudala.
Sineqembu lobuchwepheshe nelibambisanayo ukuhlangabezana nezidingo zakho. Ithimba lethu lifaka abaholi ababona kude, ithimba elinolwazi lwe-R & D kanye nochwepheshe, iqembu lokuthengisa elinekhono, abasebenzi abanamakhono, kanye nabasebenzi bokulawula ikhwalithi.
Siyatholakala ukukukhombisa uhla lwethu lomkhiqizo futhi sikuqondise ekukhetheni kwemikhiqizo efanele izidingo zakho.
1. Kumakhasimende womkhiqizo, singanikeza ukwakhiwa komshini, i-R & D, nokuvulwa kwesikhunta, ukwesekwa okuqinile kwezobuchwepheshe, kanye nohlelo oluphelele lwensizakalo.
Abathengisi bezitolo, abathengisi kanye namakhasimende azisebenzelayo, sineqoqo elanele, impendulo esheshayo, ukuthunyelwa kokuthumela, ukulethwa okusheshayo, ukuvikelwa ngemuva kokuthengisa, akukho zimali nengcindezi yokusungula.
Ngokuqinisekile i-Checheng ingahlinzeka ngezinsizakalo zobungcweti nezikilasi lokuqala njengokucela kwamakhasimende
UMKHIQIZO & UKUTHUNYELWA
Inhloso yethu ukuhlinzeka ngemikhiqizo emisha kakhulu nezinsiza ezihamba phambili ngamanani aphansi kakhulu. Si hope ukubambisana namakhasimende amaningi ekuthuthukiseni mutual kanye nezinzuzo. Abathengi bayamukelwa ukuxhumana nathi!